Ọ bụ ezie na e nwere ngwaahịa ndị ọzọ na-asọ mpi na oghere ụlọ ọrụ ahụ, enwere ụfọdụ ndịiche dị iche na Sprinklr. Nke mbụ, ha bụ naanị ụlọ ọrụ lekwasịrị anya. Ihe karịrị 80% nke ndị ahịa ha nwere ihe karịrị $ 1bn na ego ha nwetara. Sistemụ Njikwa Mgbasa Ozi Ha na-enye akụrụngwa iji mee ka azụmahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwee ike ịgafe ọwa, otu, ọrụ, nkewa, na ọdịdị ala. Ha wee wuo maka oke - ihe dịka Nhazi Asụsụ Eke, iwu akpaaka gụnyere nke na-akpata, omume na nzacha, ịchịkwa ọchịchị mmadụ. Mgbe ị na-emekọ ọnụọgụ ndekọ, mkparịta ụka, ma ọ bụ ndị ọrụ, ị ghaghị ịnwe ndị a ma ọ bụghị ya ị ga-anwụ.